Pfupiso pane "Chokwadi pamusoro penyaya yeSavolta", naEduardo Mendoza | Zvazvino Zvinyorwa
Pfupiso pane "Chokwadi pamusoro penyaya yeSavolta", naEduardo Mendoza
Encarni Arcoya | | Mabhuku, Literature
Eduardo Mendoza akaburitsa bhuku rake "Chokwadi pamusoro penyaya yeSavolta" mugore 1975. Iri bhuku rinogona kutarisirwa zvakanyanya senzvimbo yekutangira rondedzero yazvino. Mune ino inoyevedza nyaya, pasina kuramba kushandiswa kwemaitiro ekuyedza, Mendoza inopa nharo inobata kutarisisa kwemuverengi.
Kana iwe uchida kuziva zvishoma zvishoma nezve izvo bhuku iri nezve, ramba uchiverenga nesu izvi pfupiso about "Chokwadi pamusoro penyaya yeSavolta"rakanyorwa naEduardo Mendoza. Kana, kune rumwe rutivi, iwe uchironga kuiverenga munguva pfupi, zviri nani umire kuverenga pano. Cherechedzo chekukwanisika vaparadzi!
1 Zviitiko zvakakosha zvakanyanya mubhuku
1.1 Chirevo kubva kuna Javier Miranda
1.2 Kuuraya kwaSavolta
1.3 Maria Coral
1.4 Rufu rweMaperembudzi
2 Pfupiso yeZvokwadi nezve iyo Savolta kesi chitsauko nechitsauko
2.1 Zvitsauko zvechikamu chekutanga
2.2 Zvitsauko zvechipiri chikamu
3 Mavara anowanikwa mune Chokwadi pamusoro penyaya yeSavolta
3.2 Middle kirasi
3.3 Kirasi inobhadharwa yemagariro
3.5 Lumpen proletariat
Zviitiko zvakakosha zvakanyanya mubhuku
"Chokwadi pamusoro penyaya yeSavolta" ingano yekunyongana umo iyo amagariro pamwe nezvematongerwo enyika zveBarcelona pakati pa1917 na1919 (Izvo zvakangoitikawo nanhasi!). Basa racho, rinotarisa kufarira kwaro pachirongwa, rinosanganisira zvivakwa uye zvitaera.
Tevere, tichaenda muchidimbu kupfupisa zviri kuitika muchikamu chimwe nechimwe chakasiyana chebhuku.
Chirevo kubva kuna Javier Miranda
Kunyangwe hazvo munyori mukuru munhaurwa iyi ndiJavier Miranda, chapupu kuzviitiko izvi, kune zvakare magwaro akapiwa mukutongwa. Chirevo chemunyori pamberi pemutongi muNew York muna 1927, chine manotsi mapfupi akabudiswazve, chinopa ruzivo rwakakosha.
Paul-André Lepprince muFrance ane chinoshamisa mavambo anova akavimbisa mwanasikana waEnric Savolta ndokupinda mumafekitori emaoko, kwaanoronga kutengeswa zvisiri pamutemo kwezvombo kumaGerman panguva yeHondo Yenyika Yekutanga. Nguva pfupi yapfuura, Enric Savolta achafa mukurwiswa kupomerwa magandanga kubva kumabasa evashandi.
Muchokwadi, aive Lepprince akaraira kuurawa kwaSavolta, nekutya kuwanikwa uye uye nekuti aive nechido chekudzora kambani yake. Javier Miranda, anoyemura zvikuru Paul-André Lepprince uye asingazive nezvezviito zvake zvematsotsi, anozomubatawo: Lepprince anomukumbira kuti aroore María Coral, musikana wekuratidzira uyo aimbove mudiwa wake kuti amupe chinzvimbo chinokudzwa munharaunda; ndipo paanozowana chokwadi kwaari muhurukuro iyo inorondedzerwa muchikamu chipfupi chebhuku.
Lepprince akauraya nekutengesa nekambani yeSavolta, asi kupera kwehondo kwakakonzera kubhuroka kwefekitori yezvombo. Mushure mekuyedza rakakundikana basa rezvematongerwo enyika, Maperembudzi anofa zvinoshamisa.
Kana Lepprince atofa, Commissioner Vázquez anoudza Javier Miranda nezvemhosva dzake. Nguva pfupi yapfuura, tsamba kubva kuna Lepprince inosvika kuna Miranda maanomuudza kuti atora inishuwarenzi yehupenyu kuitira kuti mudzimai wake nemwanasikana vazviunganidze mushure menguva diki, kuti varege kumutsa kunyumwa. Mushure memakore mashoma, Miranda anoedza kubata mutero iwoyo. Iyo novel inopera netsamba yekutenda kubva kuna María Rosa Savolta, chirikadzi yaLepprince.
Pfupiso yeZvokwadi nezve iyo Savolta kesi chitsauko nechitsauko
Iyo nyaya yeZvokwadi pamusoro penyaya yeSavolta yakanyorwa naEduardo Mendoza inogona kuve yakakamurwa zvakajeka muzvikamu zviviri, uye chimwe nechimwe chazvo muzvitsauko zvinoverengeka uko zviitiko zvinoitika izvo, semuverengi, iwe unofanirwa kuyeuka mune yese nyaya.
Naizvozvo, isu tichakuitira iwe chitsauko nechitsauko pfupiso kuitira kuti iwe uzive kuti zvese zviri pamusoro zvatataura zvoitika kupi.
Zvitsauko zvechikamu chekutanga
Chikamu chekutanga chakaumbwa nezvitsauko zvishanu. Chimwe nechimwe chazvo chakakosha pachacho, kunyangwe dai taifanira kunamatira kune imwe, isu taizoti yekutanga ndiyo huru. Izvi zvinodaro nekuti ndipo patinoziviswa kune mavara uye mamiriro ezvinhu aripo ega ega. Ehezve, ini ndinokurudzira kuti iwe uve nerimwe bepa paruoko kuti unyore pasi sezvo ivo vachioneka chaizvo vashoma uye vanogona kunge vari zvishoma kuvhiringidza.
Muchitsauko 1, pamusoro pekusangana nevatambi, iwe unenge uinewo mamwe mareferenzi uye akateedzana ayo, panguva iyoyo, haugone kubatana, kana kufunga kuti zvine musoro Zvese zvinhu zvinovhiringidza uye zvinosanganisa zvakapfuura nezvazvino.
Kazhinji, pfupiso yechitsauko ichi ichave ipfupi: Nekuda kwechinyorwa icho Lepprince, director wekambani yeSavolta, anoverenga muIzwi reRuramisiro, anosangana nemurume. Anodaro kuburikidza nekambani yemutemo yeCortabanyes, inoenderana nekambani yeSavolta, uye kunoshanda Javier Miranda. Ikoko ivo vanoona kuti kune tyisidziro yekuramwa kambani mukambani uye vozofunga kuhaya matsotsi maviri kuti vape muenzaniso kuvatungamiriri.
Uye zvakare, kune iro Idzva reGore Idzva pati, uye kusvetuka matinoona affidavit neyekutanga vhezheni yezviitiko.
Chitsauko 2 ndicho chipfupi, uye chinongobata nemisoro miviri: kune rumwe rutivi, kubvunzurudzwa kwechipiri kwaJavier Miranda; kune rimwe racho, akateedzana kubva kumashure kwehunhu uko kwatinoona zvaive zvakaita basa rake, hukama na "Pajarito", pamwe nekufa kunoshamisa kwaTeresa naPajarito.
Chitsauko chinotevera chinotiudza zvakare nezve zvakapfuura, nezve Javier Miranda akazova sei "shamwari" yemaneja weSavolta, hushamwari hwepedyo hwaakawana munguva pfupi yakadaro ... Uye, chokwadika, inotarisa pakupera kwegore rebato, apo musiki nemutungamiri mukuru weSavolta vapfurwa vakafa pamabiko avo uye pamberi pevanhu vese varipo.
Chitsauko chekupedzisira, chitsauko chechina, chinotipa pfungwa yakati rebei nekuti, kunyangwe isu tichava nezvikamu zvakasiyana kubva kunyaya huru, zvinotevera rangano rezvinoitika mushure mekufa kwemuzvinabhizimusi, sei Lepprince, maneja shamwari yaMiranda, anosvika padome remasimba, zvirongwa zvainazvo, uye nezviito zvakasiyana zvainoita kuona kuti hapana munhu anozoitora kubva panzvimbo iyoyo.
Pakupedzisira, chitsauko chechishanu, chinotaura nezve kuferefetwa nemapurisa, kuti anonyatsotevera sei vaviri Lepprince naMiranda, nemamiriro ezvinhu evatambi vaviri ava: mumwe kumusoro, uye mumwe achipfuura nemamiriro ezvinhu akaomarara.
Zvitsauko zvechipiri chikamu
Chikamu chechipiri chenyaya iyi chinogona kukamurwa kuita zvidimbu zviviri, kune rumwe rutivi, zvitsauko zvishanu zvekutanga; uye kune rimwe racho, mashanu ekupedzisira.
Muzvitsauko zvishanu zvekutanga pane nyaya nhatu dzinoshanduka uye dzinotaura nyaya yevatambi vatatu: chekutanga, Javier Miranda uye kuti akaroora sei María Coral (kuwedzera kune zvese zvinoitika); yechipiri, pati inogara Lepprince uye mashandiro aachaita nematambudziko mukambani yake (iri kubhuroka) uye nevane masheya (mumwe wavo akakosha kwazvo); uye chechitatu, chinotidzosera kumashure, tichitaura nyaya yemufakazi anoona kufa kwaPajarito, achijekesa mapoinzi mazhinji kubva muchikamu chakapfuura.
Pakupedzisira, iyo zvitsauko zvekupedzisira zvinorondedzera nenzira ine mutsetse zvese zvinoitika ine mavara. Iyo nzira yekubatanidza iwo madota uye mune yega yega mavara anopera, vamwe vane nguva dzinosiririsa, uye vamwe kwete zvakanyanya.
Mavara anowanikwa mune Chokwadi pamusoro penyaya yeSavolta
Iye zvino zvaunoziva chitsauko nechitsauko pfupiso yezvinoitika munhoroondo yaEduardo Mendoza, hatidi kukusiya usina kusangana nevatambi vakuru. Nekudaro, isu hatisi kuzotarisa pane mavara (ayo mushure mezvose zvawatoona), asi pane iyo makirasi enharaunda anomiririrwa muzvikamu zvese. Ramba uchifunga kuti tiri kutaura nezveBarcelona uko kune akati wandei nharaunda.
Ivo ndivo mavara ane hukuru hwemagariro, vakapfuma, vane simba ... Muchiitiko ichi, vatambi vari muChokwadi nezvenyaya yaSavolta vaizopinda mukirasi iyi ndivo vanogovana uye mamaneja, semuenzaniso iye Savolta, Claudedeu, Pere Parells ... Kune izvi, manenji, kuita zvinhu usingavape chero bongozozo (kunyangwe pavanoziva kuti zvavari kuita zvakashata), nezvimwe. zvinowanzoitika.
Asi hapana varume chete, zvakare varoorani vevatambi vanofuridzirwa neiyi nhanho yemagariro, kunyangwe, mune ino kesi, yakawanda seye "vase mukadzi", ndiko kuti, vanokotama kune zvinotaurwa nevarume uye vanongoitira hanya " "munharaunda.
Kana iri yepakati boka, ruzhinji runomiririrwa ne vakuru, kana vanhu vanoona nezvebasa rekutonga nekutonga…, asi panguva imwe chete pane kusahadzika pamusoro pekuti zvavari kuita ndizvo here kana kuti kwete. Semuenzaniso, gweta Cortabanyes kana mapurisa ari kudzidza nyaya iyi.
Kirasi inobhadharwa yemagariro
Munyaya ino, pamwe chete inova chete chapupu chezvinoitika munhoroondo yese, uye kuti vanotya kuti inogona kuvamenya nenzira yakaipa. Sezvo iwe ungati "bhadhara dhadha."
Ngatitii ndiyo yakaderera nhanho yecheni yehukama hwemagariro, uye iwo mavara ayo, kunyangwe iwo asingasimudzi (nekuti munyori anotarisa kune epamusoro mabhuruni), kune mamwe anomira zvishoma.
Chekupedzisira, muchikamu chino tinogona kutaura kuti kune iwo mavara ane chinzvimbo chakadzikira pane chevapfuura, vari, neimwe nzira, vakaramba nekuda kwezvavanoita, ngazvive hupombwe, kuve vanodheerera, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Pfupiso pane "Chokwadi pamusoro penyaya yeSavolta", naEduardo Mendoza
Teo Palacios. Kubvunzana nemunyori weLa boca del diablo